Signing Ceremony of the Plan of Consultations (2018-2020) between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Signing Ceremony of the Plan of Consultations (2018-2020) between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
The signing ceremony of the Plan of Consultations (2018-2020) between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation was held at 1pm on 28 September at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw, and U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar and H.E. Dr. Nikolay Listopadov, Ambassador of the Russian Federation to Myanmar, signed on behalf of the respective Ministry of Foreign Affairs.
In accordance with the Plan of Consultations, the two Ministries of Foreign Affairs will conduct series of consultations on bilateral, regional and international matters of common interest.
Also present at the signing ceremony were Directors-General, Deputy Directors-General and responsible officials from the Ministry of Foreign Affairs and the Russian Embassy in Yangon.
မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၂၀) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
(၂၈-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၂၀) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် (သောကြာနေ့)၊ ၁၃၀ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး Dr. Nikolay Listopadov တို့မှ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများ ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်အရ နှစ်ဖက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့် နှစ်နိုင်ငံရေးရာ၊ ဒေသရေးရာ၊ နိုင်ငံတကာ ရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါ် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။